COLIBACTERIOSIS (COLIBACILLOSIS) EE DOOFAARKA: CALAAMADAHA, DAAWEYNTA IYO KA HORTAGGA - XOOLAHA
Qof kasta oo dooranaya inuu ku shaqeeyo doofaarka doofaarka waa in uu fahmo in khidmaddiisa ay u baahan tahay daryeel gaar ah iyo fiiro gaar ah. Oo ma aha oo kaliya ururinta habka nafaqada. Waxaa haboon in ugu yaraan la tababaro tabobarka ugu yar ee ku saabsan sifooyinka anatomy ee doofaarka, ka hortagga, ogaanshaha iyo daaweynta cuduradooda. Ka dib markii dhan, badanaaba aan aheyn waxyeello, marka ugu horeysa ee la arko, shubanka xayawaanku waa mid la mid ah dhimasho, haddii aadan garanaynin sida loo daaweeyo.
Si lagaaga caawiyo inaad tixgeliso sifooyinka ka hortagga, ogaanshaha, cudur-sidaha iyo daweynta cudurrada ugu badan ee doofaarka - colibacteriosis, oo sidoo kale loo yaqaano magacyada colibacillosis, colibacillosis, colidiarrhea.
Waa noocee cudurka iyo sida halista u ah
Escherichiosis wuxuu ku badan yahay waddammo badan, gaar ahaan kuwa lagu garto xaaladaha nadaafadda iyo caafimaadka xoolaha. Xanuunada Colibacteriosis ee xayawaanka waa Cudurka faafa ee infekshanka ee dhalinyarada. Sidii loogu talagalay doofaarka gaarka ah, cudurku wuxuu inta badan saameeyaa "carruurta" - laga bilaabo 3 ilaa 7 maalmood, wax yar ka yar 7 illaa 14 maalmood. Sidoo kale, cudurku wuxuu u nugul yahay dukaamada laba-iyo-bilood jir ah iyo kuwa hadda laga saaray qashinka, taas oo ay sababtay isbedel ku yimaada habka quudinta. Muddada kabacdi ee colibacillosis waxay ka timaadaa dhowr saacadood ilaa laba ama saddex maalmood. Cudurku wuxuu leeyahay heer dhimasho sare. Khudbadda xasaasiga ah waxay leeyihiin muuqaal muuqan, miisaanka jidhkoodu hoos ayuu u dhacayaa.
Ma taqaanaa? Qiyaastii 10-30% digaag ah oo jiran caloosha (qamadi) da'da caanaha (1-14 cisho kadib dhalashada) way dhintaan.
Cudurku inta badan wuxuu isu muujiyaa dayrta iyo jiilaalka, sababtoo ah xaaladaha cimilada oo sii xumaanaya, heerkul aad u fara badan ayaa ku dhuftey. Meelaha warshadaha waaweyn iyo beeraha doofaarka, colibacteriosis ee beertu waxay gaari karaan heerkulka faafa, tan intii lagu guda jiro muddada daadinta, xawaaraha iftiiminta wuxuu ka dhaqaaqaa hal qashin oo u gudbaya qaybo cusub.
Wakiilka Xabsiyada iyo Wadooyinka Caabuqa
Wakiilka keena waa habka xididka. Escherichia E. coli (Escherichia coli), oo ka tirsan qoyska Enterobacteriaceae, ee Escherichia genus. Escherichia waxay leedahay dabacsanaan (haraamida unugyada) iyo guryaha sunta ah, oo loo yaqaan bacillada naxaasta ah ee naxwaha leh oo leh wareegyo wareegsan. Cabbirku maaha mid u jilicsan qaabka loo yaqaan 'capsules' iyo 'spores'. Deegaanka wanaagsan ee Escherichia waa carrada, digada, biyaha; waxay dareemeysaa weyn +37 ° C Xaaladaha ku qoran liiska ul waa la heli karaa muddo 1-2 bilood ah. Dhismayaasha leh xayawaanka - habka ugu wanaagsan ee xayawaanka mindhicirka.
Ma taqaanaa? 250 nooc oo Escherichia ah oo loogu talogalay doofaarrada, 30 waa cudurro.
Duufaanku wuxuu geli karaa jirka dhalaaliyaha ah iyada oo loo marayo dambarka, quudinta, biyaha, digada. Escherichia ayaa sidoo kale hoos u dhigi kara qashinka iyo xayawaanka daryeelka xayawaanka leh ee kaadida iyo saxarada. Asal ahaan, cudurkan waxaa lagu kala qaadaa caannaanta, yaraanta aerogenic ama utero. Ilaha ugu suurtagalka ah ee infekshanka waa doofaarro hore u dhacay colibacillosis, ama kuwa ku jira ulubaha Escherichia. Sida laga soo xigtay cilmibaadhista, qiyaastii 40% shakhsiyaadka qaangaarka ah ee jilicsanka dadka waawayn ayaa sidan isu qaadanaya, boqolleyda cayayaanka lagu xanaaneeyo ayaa aad uga sareeya - 92.3%.
Dad badan oo doofaarka doofaarka, oo marka hore la kulmay colibacteriosis oo doofaarro ah, waxay ku deg degaa argagax si ay u raadiyaan jawaabta su'aasha ah nooca cudurka uu yahay, isla markaana lumiyo waqti qiimo leh. Si loo ogaado cudurka degdegta ah waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado qaar ka mid ah shucaacda cudurka pathopus. Heerka sare ee dufanka cusub ee dhalmada waxaa lagu sharaxay astaamahooda, dabiiciga jirka iyo muuqaalka jirka ee jirkooda. Ha doofaarka ilmaha hawlaha xubnaha oo dhan laguma hagaajin, jirka ayaa si liidata loogu habeeyey degaankiisa. Qadarka ku filan ee xab qarsoon ayaa lagu qarsoomaa mindhicirrada digirta ilmo-galeenka ah, firirka iyo bactericidal-yada casiirka mindhicirka ee marinnada mindhicirka ayaa si weyn hoos loogu dhigi doonaa, iyo hawlaha xannibaadda beerka aan weli si habboon u dhaqaajin. Waxyaabaha isku-dhafan ee arrimahan ayaa keenaya iska-caabbinta hoose ee jir-dilka cudurada.
Waa muhiim! Cabbiraadda maadada dheef-shiid kiimikaadka ee dukaamada ayaa ku dhacda meel ku dhow da'da laba bilood. Taasi waa sababta labada bilood ee ugu horreysa noloshooda, beelaha waa inay si taxadar leh u doortaan cuntadooda waxayna eegaan heerarka nadaafadda iyo caafimaadka xoolaha.
Escherichia ayaa si xor ah u gashaa jidhka doofaarka yaryar waxana uu bilaabaa inuu si dhakhso ah u dhufto. Isla mar ahaantaana, bakteeriyadu waxay qarsoodi kartaa walxaha iyo walxaha daroogada, taas oo horseedi karta suuxdinta degdega ah ee jirka oo dhan. Isku-darka Escherichia wuxuu u dhuubanayaa dhiigga iyo qanjiradu keenaan septicaemia. Xuubka xayeysiinta Escherichia ee unugyada timaha ee epithelium ee xuubka xabka ee xiidmaha yar-yar ayaa keena barar xanuun iyo fuuq bax fara badan oo jirka ah. Sababta fuuqbaxa waa shuban ba'an.
Iska hubi cudurrada kale ee doofaarka, sida: erysipelas, pasteurellosis, parakeratosis, cudurka daacuunka Afrika.
Calaamadaha colibacillosis waa shuban, fuuqbax, suuxdinta degdeg ah, qandhada illaa 40-42 ° C, septicaemia (faafida sii kordheysa ee jirka oo dhan oo leh dhaawacyo halis ah oo ku yimaada xubno kala duwan), oo si deg-deg ah u baaba'ay jirka. Enteritis (inflammation of membranes ee xiidmaha yar), enterotoxemic (edematous) iyo foomamka septic ee koorsada cudurka ayaa kala duwan. Marka la eego marxaladaha cudurka, kala soocida soo socda:
heerka subacute Raadinta da'yarta (3-5 maalmood laga bilaabo dhalashada) waxaana la socdaa calaamadaha soo socda: shuban iyo fuuqbax;
for marxaladda degdega ah cudurrada waxaa lagu gartaa shubanka, fuuqbaxa, hoos u dhigma indhaha, xanuunka fiiqan ee qabowga caloosha, casiraadyada Jiritaanka daaweynta lagama maarmaanka ah ayaa keeneysa dhimasho ka dib 3-4 maalmood. Shakhsiyaadka ka badbaaday waxay dib u-soocelin karaan 8-9 maalmood;
marxaladda sare Cudurka waxaa weheliya kor u kaca heerkulka, heerarka wadnaha oo kor u kacay, diidmo inuu cuno, ladnaansho, iyo coma. Dhimashada waxay dhacdaa 1-2 maalmood.
Isbedelada nafsaaniga ah
Veterinarians-pathologists waxay xusuusantahay in ku dhowaad dhammaan dukaamada caloosha ee caloosha ku jira caloosha, qandhicirka dareeraha, catarrhal daran iyo gawracatada dhiigbaxa. Xuubka mindhicirka, waxaa jira dhiig-baxa dhiigga iyo catarrh daran. Veterinarians-ka ayaa xusuusta ka mid ah saameynta colka, waxaa sidoo kale jira sifooyinka beerka, kelyaha iyo beeryarada, iyo bararka maskaxda. Beerku wuxuu noqonayaa midab madow.
Waa muhiim! Xaqiiqooyinkani waxay kala saaraan escherichiosis oo ka yimaada xajiinta xanuunka viral, salmonellosis, xanuunka dareenka, enterotoxemia.
Waxaa suurtagal ah in lagu baaro colibacteriosis ee dhismayaasha beeraha iyo dhismayaasha ma aha oo kaliya tixgelinta calaamadaha cudurka, laakiin sidoo kale ku saleysan xogta noolaha, natiijooyinka baadhitaanada epidemiological, kiliinikada iyo baktealiga. Tani waxay u baahan tahay in loo diro baaritaanada caafimaadka xoolaha ee miro cusub ama xubnaha (caleemaha, beerka, kelyaha, wadnaha, maqaarka, lafta tuubada, madaxa ama maskaxda, naasaha maskaxda, caloosha, qaybo ka mid ah mindhicirka yar). Qeybaha xubnaha ayaa loo diraa cilmi baaris ah si adag u xiran, weelasha aan biyuhu lahayn. Waxaa lagama maarmaan ah in loo diro qalabka si loo baaro shaybaarka ugu dambeyn afar saacadood kadib geerida. Haddii doofaarkaaga ay ka hortagaan natiijada halista ah, markaa si loo ogaado cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in loo diro saxarada ka timaadda saddex illaa afar qof oo cudurka qaba si loo falanqeeyo.
Waa muhiim! Waxaad u diri kartaa falanqaynta shaybaarka caafimaadka xoolaha qalabka oo keliya laga soo bilaabo doofaarka aan la daaweyn antibiotics.
Aan ka fekerno faahfaahin dheeraad ah waxa ay tahay in la sameeyo marka shuban laga dilo doofaarka iyo hababka waxtarka iyo tallaabooyinka waxtar leh ayaa ka caawin doona in laga gudbo.
Ka dib markii la ogaado astaamaha colibacillosis, waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo daaweyn isla markiiba. Inta ugu badan waxtarkiisu waa hab daaweyn ah oo la isticmaalayo antibioticsgaar ahaan, chloramphenicol, monomitsin iyo neomycin. Qaadashada daawada loogu talagalay xayawaanka yaryar waa inay ka sarreysaa qiyaasta dadka waaweyn: xayawaanka yaryar - 30 mg, dadka waaweyn - 20 mg oo afka ah. Si looga hortago fuuqbaxa jidhka, elektariyeyaasha ayaa lagu mudayaa qashinka, gaar ahaan, Ringer's solution. Saameynta saameyneysa Duphalac (10 mg hal qaamo-qashiir) ayaa sidoo kale la xusay. Qaadashada antibiyootikadu waa lagama maarmaan in laysku daro fitamiinada kooxda B.
Veterinarians ayaa lagula talinayaa in ay isticmaalaan "Proteotics" ("Bio Plus 2B", "Lacto-Sac"), immunomodulators (tusaale ahaan, "Lidium" oo ah qiyaasta 2 mg / kg) ee daaweynta colibacillosis. Waxaa sidoo kale jira daawooyin dad ah oo loogu talagalay daaweynta colibacillosis: gooyo yar yar, sorrel faras, johannesört wort, iyo jilif barar. Laakiin waxay ku habboon yihiin daaweynta shakhsiyaadka da'doodu tahay 10-15 maalmood.
Wax badan ka baro riyaha, fardaha, lo'da, gobollada.
Colidiaera ka hortagga waa in la kordhiyo caabbinta jidhka ee uurka iyo mustaqbalkeeda mustaqbalka. Ujeedadaas, 10-15 maalmood ka hor intaan la furin, beerta waxaa lagu go'aamiyaa in qol gaar ah oo nadiif ah, kuwaas oo dhammaan tallaabooyinka jeermiska looga baahan yahay isticmaalka soodhada, chloramine, furatsilin horay loo arkay. Beerta lafteeda si fiican ayaa loo mayraa, adduunkana waxaa lagu nadiifiyaa 0.5% Lysol ama xal 5% ah. Beeraha Faruurtu waa inay ku dhacaan qol nadiif ah oo nadiif ah. Shaqaale u aqbali doona doofaarka waa inuu si adag u hoggaansanaadaa heerarka nadaafadda iyo nadaafadda.
Waa muhiim! Cuntada dhasha ee ilmaha cusub waa in ay ka kooban tahay alaabooyin ay ku jiraan kuleylka daaweynta.
Ka hortagga colibacillosis swine, waxaa lagula talinayaa in aad isticmaasho serum. Tallaallada waxtarka leh waa Porcilis Coli, Colivac S, Neocokipor. Tallaalka waxaa loo maamulaa labada caleemood ka hor intaan la qarxin iyo doofaarka dhasha. Sidoo kale, immunoglobulins aan gaar ahayn ayaa sidoo kale loo isticmaalaa, gaar ahaan, acidophilus iyo kuwo kale. Sida aad u aragto, shubanka ugu caansan ee doofaarrada ayaa ku noqon kara dhibaatooyin badan. Waa calaamad cudurro badan, oo ka mid ah heerka ugu sareeya ee halista ah waxaa lagu gartaa colibacteriosis. Hase-yeeshe ogaanshaha cudurka oo si habboon loo daweeyo ayaa kaa caawin doonta inaad badbaadiso faraca doofaarka iyo iska ilaali khasaaraha.